Moroko inorambidza zvese UK, Germany, neNetherlands nendege nekuda kweiyo nyowani COVID-19 spike
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Marokero Kuputsa Nhau » Moroko inorambidza zvese UK, Germany, neNetherlands nendege nekuda kweiyo nyowani COVID-19 spike
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Marokero Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UK Kuputsa Nhau
Moroko inorambidza ndege dzese dzekuUK nekuda kweiyo nyowani COVID-19 spike muBritain.
Mumavhiki maviri apfuura, United Kingdom yakazivisa zvimwe zviitiko zvitsva zveCOVID-19 kupfuura France, Germany, Italy neSpain zvakabatanidzwa.
Moroko inorambidza ndege kuenda nekudzoka kuUK pamusoro pekuipa kuri kuita COVID-19 mamiriro kuGreat Britain
Mutakuri weBritish EasyJet akanzura rwendo rwekubuda kubva kuUK kuenda kuMorocco kusvika Mbudzi 30.
Mukuru weBritish wezororo anoshanda TUI ari kushanda nevatengi kuronga kusimuka kwavo kubva kuMorocco.
Hurumende yeMorocco yakazivisa kuti dzendege dzese kuenda nekudzoka kuUK, Netherlands, neGerman dzakamiswa pakati pehusiku neChitatu.
Vakuru vehurumende muRabat vakati kurambidzwa kwendege kuUK kwakaitwa nekuda kwekuwedzera kwakanyanya kwenhamba dzehutachiona hweCOVID-19 kuGreat Britain.
Kufamba uku, kunozoitika kubva pa23: 59GMT neChitatu, kwakasimbiswa neMoroccan National Office yendege, iyo yakayambira kuti ichagara munzvimbo 'kudzamara kuziviswa.
Sarudzo yehurumende yekurambidza kufamba inogona kukanganisa mhuri muEngland neWales kuronga kuenda kunzvimbo inozivikanwa yevashanyi yeBritain panguva yehafu yetemu, inotanga svondo rinouya.
Mutakuri weBritish EasyJet, iyo inomhanya nendege pakati peEurope ne Moroko, yadzima rwendo rwakabuda kubva kuUK kuenda kuMorocco kusvika Mbudzi 30.
EasyJet iri muhurukuro nehurumende yeMoroccan nezve kupa nendege dzekudzosera vagari vekuUK vanozviwana vakanamatira kunze kwenyika nekuda kwezvirambidzo.
Mukuru wezororo anoshanda TUI akasimbisa kuti akataura nehurumende yeMoroccan nezvedanho iri, ndokuti kambani iri kushanda nevatengi kuronga kubuda kwavo kubva kuNorth Africa nyika.
Sarudzo yekurambidza kufamba pakati peUK ne Moroko inouya sevakuru veBritish vanorekodha pamusoro pezviuru makumi mana zvemakumi masere emakesi eCOVID-40,000 pazuva, uye nyika yakazivisa kufa kwayo kwezuva rimwechete kubva kucoronavirus kubva munaKurume.
Mumavhiki maviri apfuura, UK yakazivisa zvimwe zviitiko zvitsva zveCOVID-19 kupfuura France, Germany, Italy neSpain zvabatanidzwa.
Mukuru weboka reBritish amburera NHS Confederation, Matthew Taylor, ayambira kuti UK "iri kugumbuka ikaita dambudziko rechando," ichisiya basa rehutano "pamucheto."
Nekudaro, hurumende yeUK yakaramba mafoni ekuti ishandise COVID-19 zvirambidzo pasi payo COVID 'Chirongwa B,' ichitonga chero zano rekukiya pamusoro pechando.